FITOKANANA DREN MORONDAVA : Napetraky Rajaonarimampianina ny vahoaka
Tsy tonga nanotrona ny fitokanana ny Biraon’ny Dren any amin’ny Distrikan’i Morondava ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, omaly, na dia naresaka tao an-toerana aza ny fanambaràna ny fahatongavany nandritra ny andro vitsivitsy izay nataon’ireo tompon’andraiki-panjakana. 23 novembre 2017
Napetrapetraky ny Filoha indray ny vahoakan’ny Faritr’i Menabe sy Morondava. Araka ny vaovao azo avy any an-toerana dia ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta Olivier Mahafaly Solonandrasana sy ny minisitry ny Fanabeazam- pirenena Paul Rabary ary ny minisitry ny Fampianarana ambony Marie Monique Rasoazananera no nalefany nisolo tena azy.
Ankoatra ireo dia ny Solombavambahoaka voafidy tao Miandrivazo irery ihany no mpikambana avy ao amin’ny Parlemanta hita teny an-toerana sy ireo ben’ny tanàna. Tsy niala tsiny akory na nilaza ny antony tsy nahatongavan’ny Filoha ny Lehiben’ny Governemanta Olivier Mahafaly Solonandrasana nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony fa hoe tsy afaka fotsiny.
Fitaovam-pianarana no zavatra noentina nozaraina tamin’ny mpianatra tany an-toerana nandritra ny lanonana fitokanana ny biraon’ny Dren ao Morondava ity. Tsy nasian’ny Praiminisitra resaka ny zavatra tena maharary ny vahoaka ao Menabe dia ny tsy fandriampahalemana, ny dobon-drano Dabaraha na tsy hiresaka ny sosialim-bahoaka ankapobeny izay tena andrasan’ny mponina avy amin’ny fitondrana ankehitriny aza.
Raha nanontanian’ny mpanao gazety namana tany an-toerana ny ben’ny tanànan’i Morondava teo aloha dia nilaza ity farany fa mazava ny tena marina raha ny fahitana ny habetsaky ny olona tonga teto. Tsy manana hery ny Hvm aty an-toerana satria mafy ny mpanohitra dia ny antoko Mapar izany.
Noterena ireo mpampianatra avy any amin’ny Kaominina
Araka ny fampitam-baovao voaray dia noteren’ny Dren sy Cisco Morondava ireo mpampianatra avy any amin’ny Kaominina tsy maintsy tonga amin’ny fitokanana ny Biraon’ny Dren notanterahina omaly io. Tanjona dia ny hameno laharana ny olona sy hahitan’ny Filoham-pirenena fa mbola tia azy ny vahoaka. Nolazain’izy ireo fa any Morondava no hanomezana ny tambin-karama ary nisy tamin’ireo mpampianatra Fram noho ny tahotra dia nitrosa vola mihitsy hatao saran-dalana sy sakafo eny amin’ny lalana ary hatao vatsy mandritra ny fotoana ijanonana ao Morondava.
Hatreto dia mbola tsy fantatra na azon’ireo mpanabe izany tambin-karama izany fa tamin’ny fotoana nanoratanay mbola tsy tapitra ny lanonana any an-toerana. Voalaza fa ireo mpampianatra tao an-toerana dia tsy rotitra amin’izany ka nahatonga ireo tompon’andraiki-panjakana sasantsasany nanery ireo avy any amin’ny Kaominina hiakatra hanotrona ny fitokanana ny biraon’ny Dren. Raha ho an’ny Distrikan’i Morondava manokana dia aza manantena ny vahoaka ao an-toerana ny Hvm amin’ny fifidianana 2018, hoy ny vahoaka.